Soosaarayaasha Cuntada Shiinaha iyo alaabada iibiya | Farshaxanka Milucky
1. Sii daa waxyaabaha caruurtu ku ciyaaraan. U oggolow in shucuurtaadu hawo gasho, walaaca fekerka, madadaalo - sidoo kale waxtar u leh diiradda iyo fikirka qotada dheer. Jimicsiga baxnaaninta iyo shucuurta shucuurta. 2. Sare u kac kacsan oo super ah. Hal gacan oo keliya qaado oo ururin weyn, waxaad sifiican ula yaaban doontaa sida tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib Ah Ay Uga Bilaabato. 3. Madadaalo layaab leh oo lagu tuuro. Sida toy, hadiyad, hadiyado dhalasho, shaybaar soo bandhiga, aruurinta, qurxinta gudaha, props iskoolka, barbaarinta caruurta, tababarka tababarka dhaqan celinta iwm. 4. jilicsan iyo c ...
1. Sii daa waxyaabaha caruurtu ku ciyaaraan. U oggolow in shucuurtaadu hawo gasho, walaaca fekerka, madadaalo - sidoo kale waxtar u leh diiradda iyo fikirka qotada dheer. Jimicsiga baxnaaninta iyo shucuurta shucuurta.
2. Sare u kac kacsan oo super ah. Hal gacan oo keliya qaado oo ururin weyn, waxaad sifiican ula yaaban doontaa sida tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib Ah Ay Uga Bilaabato.
3. Madadaalo layaab leh oo lagu tuuro. Sida toy, hadiyad, hadiyado dhalasho, shaybaar soo bandhiga, aruurinta, qurxinta gudaha, props iskuul, barashada caruurta, tababarka dhaqan celinta iwm.
4. Naqshad jilicsan oo quruxsan. Soodhadhka isbuunyada runti waa taabasho raaxo leh, muuqaalka dhabta ah, urinta macaan iyo sayga kawaii super super.
Alaabada lagu ciyaaro ee 'squishy' waa waxyaabaha qurxinta wanaagsan, haddiyadaha xayeysiinta iyo alaabada lagu nasto ee walaaca leh. Jumbo qurxinta jilicsanaanta squashy waxay soo jiidasho u leedahay qaababkeeda kala duwan, dusha sare oo siman iyo midabyo dhalaalaya, alaabada sida toy rooti ubaxyo leh, toy rooti ubax leh, caruusadaha ubaxyada ubaxyada leh, kuwa caruusadda miraha ubaxyada leh ayaa soo jiidasho leh oo caan ku ah suuqa. Sidoo kale, alaabada caruusadda leh ee buufiska lagu buufiyo si dhib yar ayaa loo buufin karaa oo aan si fudud loo qalloocin, oo ay u dheer tahay taabasho jilicsan iyo culeys fudud, oo noqda toy gacanta gacantiisa marka la sii daayo.
Kubadaha cidhiidhiga waxaa loogu talagalay in lagu kordhiyo awoodda dadka & dabacsanaanta iwm.
Tuuji gacantaada, waxay leedahay dareen jilicsan, midab leh.
Ka dib waa siideysaa, waxay ku soo laaban doontaa qaabka asalka ah goor dhow.
Waxay sidoo kale naftaada dejin kartaa, shaqaale kasta oo mashquul ah wuxuu isticmaali karaa kubad walwal leh markii aad shaqada ku dhibtoodo. Ku habboon sida hadiyado xayeysiis ah oo loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta da'da3 + .Waxaad ku dari kartaa xarig si ay u noqoto silsilad muhiim ah ama qaabka suunka taleefanka.
Hore: Miraha Squihy
Xiga: Qurxinta squihy
Cunnada loo yaqaan 'squishies Toy'
Si tartiib ah u Kordha Raashinka Cunnada
Cunnada loo yaqaan 'squishies Food'
Squishies Toy Cunto
Moodada Cunnada ee Beeraha ah
Toy Cuntada Toosaha ah
Alaabta Caruurtu ku Ciyaaraan
Nooca Cuntada Yar ee Mini
Cuntada udgoon ee Bulxan
Iskudhac Cuncun Cuncun leh
Kubadda Culeyska Caafimaadka
Kubadda Cadaadiska Xayawaanka